Kiimikada lagu shubo kufsiga soo noqnoqda ayaa laga ansixiyay Pakistan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Pakistan War Deg Deg Ah » Kiimikada lagu shubo kufsiga soo noqnoqda ayaa laga ansixiyay Pakistan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Pakistan War Deg Deg Ah • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Kiimikada lagu shubo kufsiga soo noqnoqda ayaa laga ansixiyay Pakistan.
Waxka bedelka cusub ayaa soo bandhigaya ciqaabta dilka ama xukunka daa'imka ah ee kufsiga kooxda iyo sidoo kale ka saarida kiimikada ee dambiilayaasha galmoodka ee soo noqnoqda, iyadoo ogolaanshaha dembiilaha.
In ka yar 3% dacwad oogista kufsiga ama kufsiga ee Pakistan waxay keentaa xukun.
Haddii tuurista kiimikada loo qoondeeyo ciqaab ahaan, "waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo guddi caafimaad oo la ogeysiiyey," sida uu qabo sharciga cusub.
Pakistan waxa ay ku biirtay Kuuriyada Koonfureed, Poland, Czech Republic iyo qaar ka mid ah gobolada Maraykanka, halkaas oo laga soo saaray shubista kiimikada.
Wax ka bedel cusub oo lagu sameeyay sharciga jira, kaas oo ogolaanaya in la dadajiyo xukun deg deg ah iyo ciqaabo aad u daran kuwa kufsiga geystay, ayaa waxaa shalay u codeeyay xildhibaanada Pakistan.
Dembiilayaasha lagu helay kiisas badan oo kufsi ah ayaa hadda wajihi kara sunta kiimikada Pakistan iyadoo baarlamaanka dalka uu si weyn u taageeray sharci cusub oo loogu talagalay in lagu joojiyo kororka xadgudubyada galmada.
Kasbashada kiimikada ayaa lagu tilmaamay biilka inay tahay hab loo maro "qofka laga dhigo mid aan awoodin inuu galmo sameeyo muddo kasta oo noloshiisa ah, sida ay ku go'aamin karto maxkamada iyada oo loo marayo maamulka daroogada."
Waxaa la qorsheeyay in la dhiso maxkamado gaar ah oo dalka oo dhan ah si loo hubiyo in xukunnada kiisaska xadgudubka galmada lagu fuliyo "si degdeg ah, gaar ahaan afar bilood gudahood." Haddii tuurista kiimikada loo qoondeeyo ciqaab ahaan, "waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo guddi caafimaad oo la ogeysiiyey," sida uu qabo sharciga cusub.
Mushtaaq Axmed, oo ah senatar ka tirsan xisbiga Jamaacada Islaamiga ah ee diiniga ah, ayaa horay u cambaareeyay sharcigan oo uu ku tilmaamay mid ka hor imaanaya diinta Islaamka. Axmed waxa uu ku dooday in aan shareecada islaamka lagu soo hadal qaadin kiimikaad, isla markaana dadka kufsada lagu daldalo meel fagaare ah.
Adigoo isticmaalaya mukhaadaraad si loo yareeyo libido-ga dembiilayaasha galmoodka ee soo noqnoqda, Pakistan waxa uu ku biiray South Korea, Poland, Czech Republic iyo qaar US gobolada, halkaas oo lagu soo bandhigay shubista kiimikada.
Tallaabadan ayaa waxaa miiska soo saaray sanad ka hor madaxweynaha Pakistan Arif Alvi isagoo ka jawaabaya cabasho ballaaran oo dadweyne oo ka dhalatay kororka guud ee dalka ee kiisaska kufsiga ee ay ku lug leeyihiin haweenka iyo carruurta labadaba.
Waagaas, Amnesty International waxay dhaleecaysay tuurista kiimikaad sida "arxandarro, bini'aadantinimo ka baxsan", iyadoo kula talisay Islamabad inay taa beddelkeeda diiradda saarto dib-u-habaynta nidaamkeeda caddaaladda ee "qallalan" iyo inay hubiso caddaaladda dhibbanaha.
Sida laga soo xigtay NGO-ga maxaliga ah ee ka dhanka ah kufsiga, in ka yar 3% kufsiga ama kufsiga ee Pakistan waxay keenaysaa xukun.